Sadio Mane oo ku guuleystay abaal marinta Xidigga sanadka ee Afrika - Jowhar Somali Leader
Home Ciyaaraha Sadio Mane oo ku guuleystay abaal marinta Xidigga sanadka ee Afrika
Abaal marinta xidiga sanadka ee qaarada Afrika ugu fiican waxaa ku guulaystay Sadio Mane kaas oo codbixintii la sameeyay ku garaacay saaxiibkiisa Liverpool ee Mohamed Salah iyo xidiga Man City ee Riyad Mahrez.
Sadio Mane oo uu sanadkii 2019 u ahaa mid layaableh oo aanu waligii ilaawi doonin waxa uu kooxdiisa Liverpool ka soo caawiyay koobabka Champions League, UEFA Super Cup iyo waliba Club World Cupka.
Sadio Mane ayaa Mohamed Salah iyo Riyad Mahrez ka hor qaaday abaal marinta Afrika ugu qaalisan ee xidiga sanadka isaga oo soo gaba gabeeyay labadii sanadood ee xidhiidhka ahaa ee uu Mohamed Salah ku soo guulaystay.
Sadio Mane waxa uu Liverpool u soo ciyaaray 53 kulan intii lagu jiray sanadkii 2019 wuxuuna ku soo dhaliyay 32 gool isaga oo ugu danbayn ku guulaystay abaal marinta xidiga sanadka ee qaarada Afrika ugu fiican.
Xidiga Real Madrid amaahda kaga maqan ee Achraf Hakimi oo qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxda uu hadda ka tirsan yahay ee Borussia Dortmund iyo xulka qarankiisa Morocco ayaa loo doortay da’yarkii 2019 ugu fiicnaa qaarada Afrika.
Dhinaca kale xulka qaranka Algeria ayaa ku guulaystay abaal marinta kooxda kubbada cagta ragga ee qaarada Afrika ugu fiicnayd sanadkii dhamaaday ee 2019 kadib markii ay soo qaateen sanad taariikhi ah.
Riyad Mahrez ayaa goolka sanadka ee Afrika ee 2019 ugu guulaystay darbadii laaga xorta ahayd ee uu Nigeria ka dhaliyay kaas oo noqday gool aanu waligii Mahrez ilaawi doonin isla markaana uu abaal marin muhiim ah ugu guulaystay.